​भोट के मा ?
Monday, 17 Jul, 2017 5:30 PM
शम्भु श्रेष्ठ । ‘नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद । भोट के मा ? हसियाँ हथौडामा ।’ यो नारा राजनीति नबुझ्ने माओवादी कार्यकर्ताले लगाएका होइनन् । यो नारा त नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगाएका हुन् । यो नारा सुनेपछि स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस किन हा¥यो भन्ने विश्लेषण गरिरहनु परेन । स्वयं देउवाले नै हसियाँ–हथौडामा भोट हाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ कसरी ? देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि हसियाँ र हथौडामा भोट मागेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन देउवाले कांग्रेसको नीति, सिद्धान्तलाई पिण्ड चढाएका हुन् । एमालेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा हराउनकै लागि बनेको देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले अब हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि धुलो चाट्ने निश्चित छ । किनभने, छिमेकीको दलाली गर्नेबाहेक देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने ‘भिजन’ यो गठबन्धनमा देखिएन ।
प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धन सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि जुन अभियोग लगायो र फिर्ता लियो, त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार थियो । त्यो महाअभियोग कार्कीमाथि प्रतिशोध साँध्नका लागि मात्रै लगाइएको थियो भन्ने कुरा साझा सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाको ओठ मुख सुकेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अर्को कुरा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ डीआईजी नवराज सिलवाललाई एकातिर पन्छाएर तेस्रो नम्बरका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने जुन लज्जाजनक काम गरियो त्यस घटनाबाट प्रचण्ड–देउवाको गठबन्धन सरकार पुरै नांगियो । देउवाको हठमा गरिएको यो निर्णय सच्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना समेत आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्नेबाट भएन । उल्टै सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध ‘माइन्यूट’ लेखेर नेपाली कांग्रेसको इतिहासम कलंकको टिका लगाउने काम भयो । हुँदाहुँदा एआईजी बढुवामा समेत नवराज सिलवालमाथि पूर्वाग्रह राखियो । प्रचण्डको ‘जनसत्ता’का लागि यी घटना सामान्य भए पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीका लागि यी घटना सामान्य हुन सक्दैन ।
कांग्रेसले चुनाव किन हा¥यो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा माथिका यी घटना त जोडिन्छन् नै । राजदूत नियुक्तिमा भएको अनियमितता पनि कांग्रेस हार्नुको एउटा पाटो हो । राजदूत नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि एक जना राजदूतको नाम फिर्ता लिनदेउवा बाध्य बनेका थिए । कांग्रेसका नेताहरुलाई लाग्दो हो, सत्तामा बसेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ । तर, सत्तामा बसेर जे–जे गरिरहेका छन्, त्यसको एक एक हिसाब जनताले राखेका हुन्छन् । मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले जनतालाई निरन्तर सुसूचित बनाइरहेको हुन्छ । त्यसैले अब इतिहास बेचेर अथवा विपी कोइरालाको नाम बेचेर कांग्रेस पार्टीको व्यापार चल्नेवाल छैन । स्थानीय निकायपछि हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि जनताले यिनै प्रश्न उठाउनेछन् । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ जनताले नपाउँदासम्म हरेक निर्वाचनमा कांग्रेसलाई दण्डित गरिरहने छन् । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुने हुँदा जनता जिस्क्याउने शासक सधैँ दण्डित हुने गरेका छन् विश्वमा । अब त्यस्ता शासकलाई दण्डित गर्ने बेलाआएको छ, नेपालमा ।